asalsashan » मलाई छोरी नै हुन देऊ ! मलाई छोरी नै हुन देऊ ! – asalsashan
छोरी भएकै कारणले मेरो १५ वर्षको भाइको सुरक्षामा हिड्नु छैन, मलाई छोरी भएर नै आत्मनिर्भर बन्नु छ । त्यसैले मलाई छोरी मान्छे भएर नै हिड्न देउँ । म पनि एक छोरी मान्छे हुँ, मैलै पनि छोरी हँुदाका दुःख, कष्ठ, पीडा र लान्छना धेरै थोरै भएपनि भोगेकी छु, सुनेकी छु र त्यो भन्दा बढी देखेकी छु ।
एउटा महिला अर्थात छोरी मान्छेले विवाह पछि छोरा नभएकै कारण धेरै छोरी जन्माउनुको पीडा, परिवारले गर्ने व्यवहार र समाजले छोरा नभएकै कारण लगाइने लाञ्छना र हेर्ने दृष्टिकोणको र वहुविवाह गरेको सानैदेखि अनुभव छ । छोरी भएकै कारणले समयमै विवाह गरेर घर सम्हाल्ने संकार सिकाइन्छ, विवाह भइसकेपछि श्रीमानको घरमा जतिसुकै हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण हुदा पनि तिमी उफ समेत नगरेर इज्जतले बसेर घरवार चलाउ भनेर सिकाइन्छ । न कि तिमीलाई कुनै किसीमको दुःख पर्दा वा हिंसा हुदा तिम्रो पनि घर छ । फर्केर आउ भन्न सक्ने आँट हाम्रा कसैका आमावुबा र दाजुभाइलाई नै छ ।
छोरी भएकै कारण जहाँतही आफ्नो समस्या भन्न पाइदैन । केही भइहाले पनि घर सम्हाल्न नसकेकी बिग्रकी आइमाईको संज्ञा दिइन्छ । यसमा नै मेरो आपत्ती हो । त्यो सुदुरपारी र कर्णाली जस्ता ग्रामिण क्षेत्रमा हजारौ महिला अर्थात नारीहरु यहि पीडा लिएर बाँचिरहेका छन् । जतिसुकै हिंसा, दुब्र्यवहार भएपनि सहन बाध्य छन किनकी उनीहरु आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उनीहरुमा आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने कुनै पेशा नै छैन् । किनकी उनीहरु अशिक्षित छन् दुनियादारी जानेको छैन । उनीहरुलाई २÷४ जनाको अगाडि बोल्न त के ठाडो शिर गरेर उभिन पनि डर लाग्छ, । राजधानी लगायतका अन्य शहरका ठुला–ठुला होटेल र रेष्टुरेन्टमा नारीवादी समाज , नारी समानता र समान सहभागिताका कुरा गरिरहदा कताकता मनमा चसक्क बिझेर आउँछ । जबकी ति ग्रामिण क्षेत्रका नारीहरुलाई रातदिन गिट्टी कुटेर, रातदिन मेलापात र हाट बजारको भारी बोकेर छाक टार्न पनि धौधौ छ । छोरा मान्छे स्वतन्त्र रुपले दिनभरि डुलेर ,पाटीपौवा होटेल चौतारा लगायत विभिन्न ठाउँहरुमा शिक्षाका कुरा गर्छन, राजनीतिका कुरा गर्छन, परिवर्तनका कुरा गर्छन, आर्थिक र सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय लगायत विभिन्न सन्दर्भका कुराहरु गरेर बस्छन् र राती अबेर घर फर्किन्छन् । सबै कुरा सुन्ने बुझ्ने र जान्ने सवै अवसर पाउँछन र भनिन्छ छोरो सबै कुरा जान्ने भलाद्मी भइसक्यो । र त्यहि जान्नेको भलाद्मी छोराले नै पछि हिंसा गर्छ, छोरी धेरै जन्मिदा छोराको चाहनाले बहुविवाह गर्छ । छोरी मान्छे कहिलेकाही घर वाहिर निस्केर अबेर आउदा दशौ प्रश्नको जवाफ दिनुपछै । धेरै डुल्नुहुदैन, कसैका कुरा सुन्नुहुदैन भनेर सामाजिकरणमा रोक लगाइन्छ, अनि भनिन्छ छोरा मान्छे सक्षम हुन्छन् र तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । कहाँ छ शसक्तीकरण ? महिलाहरुलाई आत्मसम्मान, आत्म विश्वास, र शक्तिको अनुभूति गराउने गरी सक्षम बनाइनुपर्छ । तत्कालिन असमान राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई चुनौति दिन सक्नुपर्छ र त्यस्ता असमानतापुर्ण क्षेत्रहरुमा आमुल सुधार गर्न जरुरी छ । के हाम्रो समाज यसमा सहमत छर ? के हाम्रो राज्य तथा स्थानीय निकायले यसवारे बनाइएका नीती कार्यवन्यन गर्न सफल छर ? महिलाहरुको विकास तवसम्म सम्भव हुदैन जवसम्म उनीहरुलाई पितृसत्तात्मकता र असमानतावाट मुक्त राख्न सक्षम तुल्याइदैन । शसक्तीकरणलाई केवल लिङ्ग सम्वन्धहरुसँग मात्र जोडिनु मात्र उपयुक्त हुदैन । बरु यसलाई महिलाहरुसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दाका रुपमा लिइनुपर्छ ।
नारीवादले महिला र पुरुषवीचका असमानतालाई अस्वीकार गरेर महिलाको बौद्धिक एवं व्यवहारिक शसक्तीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छ । महिलाहरु पितृसतात्मक व्यवस्थाद्धारा जहासुकै उत्पीडित छन् र हिंसात्मक रुपवाट समेत पीडित छन् । जबसम्म सत्ता, शक्ति र सम्पतिमा समान अधिकार र सहभागिता हुदैन तवसम्म शसक्तिकरण सम्भव छैन् । यसका लागि सवैको व्यक्तिगत आयमा बृद्धि,रोजगारीमा पहुँच, सम्पतिमा स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विभेद र असमानताको अन्त्य, समाजमा उचित स्थान ,घरायसी र अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र स्वतन्त्रताको प्रत्यभुति गराउन जरुरी छ ।
आफ्नो समुदाय, वडा, गाउपालिका,नगरपालिका र जिल्लामा कति गरिव परिवारका छोरी अर्थात महिला मान्छेहरुले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाएर सक्षम बन्न सके भनेर लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । यदि पाएन भने किन पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी हो । यसैका लागि हो संघियता । के समाज बदलिन जरुरी छ ! विकासको एक हिस्सा नेै हो शसक्तिकरण । हामी चाहन्छौ पुरुष महिला समान हुन । हामीले पितृसत्ता हटाउने प्रयास गर्यौ तर त्यसभित्रका परम्परागत सोच, ब्यवहार प्रचलन र प्रवृति हटाउन सकेनौ । नेपालमा लगभग ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको छ, तरपनि कुनै न कुनै ठाउँमा अझै उत्पीडन र भेदभावमा छन् । प्राय सवै ठाउँमा असमानता छ ।
संविधानमा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिइयो तैपनि व्यवहारमा त्यस्तो निर्णयको प्रभुत्व पुरुषमा गायो । त्यस्तै राजनीतिमा पुरुष नेताले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्न महिलाको नाम प्रस्ताव गर्छन तर महिला नेतृत्वमा स्थापित भएको हेर्न चाहदैनन् । नेतृत्व त्यहा चाहिन्छ जहा उत्पीडन हुन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा महिला उत्पीडन अत्याधिक छ । संविधानले जति नै अधिकार दिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । संघियताले गाउँगाउँमा राजधानी त ल्यायो तर त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैन ।
धेरै छोरी मान्छेले आधारभूत शिक्षा पुरा गरेपछि आर्थिक अभावका कारण प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेर विचमै छोड्न वाध्य छन् । हरेक व्यक्तिका लागि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने उपायहरुको वैकल्पिक खोजी गर्न राज्य र स्थानीय तहले जरुरी छ । प्रत्येक तहमा निर्णय प्रक्रियमा अर्थपुर्ण सहभागिताको प्रत्याभुत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । सवैलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर वन्ने वातावरणको सिर्जना गरियोस् । जबसम्म महिलाहरु आर्थिक रुपमा सशक्त हुन सक्दैन तबसम्म समानता र समृद्धिको परिकल्पना पुरा गर्न सकिदैन ।
यसै सन्दर्भमा भारतीय मानवअधिकारकर्मी अर्थात नारीवादी अभियान्ता कमला भासिनले भन्नुभएको छ । “हामीले चाहेको समाज पितृसत्ताको ठाउँमा मातृसत्ता चाहेको होइन बराबरी चाहेको हो” । चाहे त्यो सत्ता, सम्पति र शक्तिमा किन नहोस । हो हामीले चाहेको समाज पनि यहि हो ।
रावल पत्रकार महासंघ बाजुराका सदस्य तथा प्रेस संगठनका प्रदेश सदस्य हुन् ।